Inona zodiaka famantarana ny lalao ho an'ny Aquarius vehivavy. Sipa
Noho izany, izy dia manana ny tena manokana (an-tsitrapo) en akanjo style sy mahafantatra ny fomba nametraka ny toe-javatra manaitra. Matanjaka ihany koa ny lehibe ry zareo tamin’ny rano vehivavy. Inona no nanomboka, mahatonga anao ho vonona ary rehefa tsy andrasana azy be loatra. Ny Aquarius-Mpanjakavavy teraka ho loner, mahatsapa fa na dia ny ao amin’ny orinasa lehibe. Raharaham-barotra izy dia asa ny vehivavy, noho izy ireo malaza, miatrika fanamby vaovao sy ny hihaona izany fatra-paniry laza. Ao amin’ny fiaraha-miasa, ny rano dia misokatra ho an’ny vehivavy ny zava-drehetra. Manandrana zava-Baovao mba hitondrana vàhana ny fifandraisana sy mitandrina ny olon-tiantsika iray, dia toy izany ny rantsan-tongotra. Ny fiaraha-miasa natory, ary toy ny mbola tsy mampiditra am-ponja ianao, izany dia mahafinaritra mpiara-miasa, feno inventiveness.
Misy abstruse hevitra Aquarius-ny Mpanjakavavy dia miezaka ny fifandanjana-olona ny zava-misy. Dia manontany anao na oviana na oviana ny»Nahoana», fa omeo ny hevitrao, foana ny lehibe ny saina izay tiany. Manana fifandraisana feno isan-karazany ary dia toy izany koa ny asa tsara nandritra ny taona maro. Koa ny Gemini olona, ny rano vehivavy iray milomano ao amin’ny onjam-halavany. Izy no tsy efa ho matanjaka toy ny Aquarius-ny Vehivavy izay mamelona anao, fa ny hevitra lehibe izay afaka ho tonga saina. Ny Mpitory, ny rano Vehivavy iray mizara ny hafanam-po. Satria samy manana penchant manangona, miara-miaina ao anatin’ny Korontana, mahatsapa, fa tena hahazo aina. Rano vehivavy sy ny Fiainany hifanaraka miara-tena tsara. Izy ireo dia samy tampoka sy ny tena fanantenana. Izy ireo tsipiriany samy hafa ny filan’ny ny Fiainana, ary manana be dia be ny voly. Roa»rano ny olona mba»hanao ny tsara olo-malaza. Izany Ny fifandraisana feno adala hevitra fa tsy azo zohina amin’ny any ivelany. Tsy fitiavana izany fa ny mba hihoatra ny hafa amin’ny hevitra sy fotsiny mila mitandrina fa tsy hihaza. Ny rano-vehivavy, ny ara-pihetseham-po izao tontolo izao ny trondro-olona ny hahita ny alalan izany ihany koa miasa tena tsara. Ny homamiadana no tsy mazava, miaraka amin’ny nibedy toetry ny Aquarius-Mpanjakavavy. Izy no saro-pady loatra ary koa mangina, mba ho afaka amin’ny lalao. Ny vondron-Kintana sy ny Aquarius-ny Mpanjakavavy mitambatra ny manao ny marina.
Fa raha tsy izany ihany koa, na inona na inona
Ny Ntaolo dia ny olona hendry tsara sy milamina, amin’ny lafiny iray ny rano vehivavy mahatsapa tsara. Ny Capricorn ny Aquarius-ny Mpanjakavavy dia maina sy niverin-dalana. Izy foana no tsara fa ny zavatra rehetra dia misy dikany. Ireo dia matetika no ratsy ny vazivazy, sy ny fanamboarana ny Aquarius-Mpanjakavavy ny mahafinaritra ny tena. Ny Maingoka mety ho tsy misy marimaritra iraisana, ny Aquarius-ny vadin’ny Mpanjaka, dia tsy vonona ny tsy tapaka bebe kokoa amin’ny seza aoriana.
Ankoatra izany, ny moodiness ny Scorpio ho anao
Ny liona dia ny Aquarius-ny vadin’ny Mpanjaka, dia nahita, dia ny fanamby avy dia miezaka ny hanao izany ho toy ny Dompteurin. Mety hanatevin-daharana ny liona fa fotoana, mikendry ny farany izy dia mitady fa haingana ny Sakany.
Ao Aquarius sy Taurus tontolo collide
Ny ao an-tokantrano streak sy ny faniriana ho amin’ny fahafahana tsy mandeha miaraka amin’ny rehetra
← Maimaim-POANA India Online Chat Room
Nandamina ny Fanambadiana: Inona ny Mangataka ny Lehilahy amin'ny Fivoriana Voalohany →